Doodda toddobaadlaha | KONGOLISOLO
Posted By: KongoLisolowaa: July 4, 2020 00: 20 No Comments
Dooddu way furan tahay! 46 sano, gaar ahaan gumeystihii Faransiiska, ragga dhalinyarada ah waxaa lagu qasbay inay ka shaqeeyaan dhismaha wadooyinka tareenka, ee ku yaal dhir ...	Akhri wax dheeraad ah
Dooddu way furan tahay! Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya Yurub iyo Afrika ayaa ah in Afrika ay asal tahay iyada oo aan dhawaaqyo badan sameynin iyo in Yurub ...	Akhri wax dheeraad ah
Posted By: KongoLisolowaa: Juun 20, 2020 00: 20 No Comments
Dooddu way furan tahay! Dadka asaliga ah ee "Masar" maahan isku dhafka Greco-Coptic, Arab ama Turks, laakiin waa farac toos ah oo Kemet ah, "Kemetyu". ...	Akhri wax dheeraad ah